बजेट अति गोप्य किन राखियो ? यस्तो छ आशंका
काठमाडौँ – आज संसद्मा अर्थमन्त्रीले पेस गर्ने बजेटमा विगतमा भन्दा धेरैको चासो छ । कोरोना महामारीले आक्रान्त अर्थतन्त्र उठ्दा त्यो सँगै आफ्नो आर्थिक समस्या समेत हल हुन्छ होला भन्ने अपेक्षामा सबै नेपाली छन् । यसरी बजेट फरक र तलका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको हुने अपेक्षा छ ।
के बजेट त्यस्तै बनेको होला ? विगतको परम्परालाई समेत क्रमभङ्ग गर्दै अति गोप्य राखिएको आव २०७७/०७८ को बजेटले आधारभूत वर्गको हित रक्षालाई केन्द्रमा राखेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसो त अर्थमन्त्रीले बजेट गोप्य राख्न सबै विधि अपनाएका छन् । विगतमा संसद्मा प्रस्तुत गर्नु भन्दा अघिल्लै दिन राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे ब्रिफिङ गर्ने चलन थियो । तर, हिजो (बुधवार) त्यो काम भएन । गोप्य राखिएको बजेटबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बिहीबार नै ब्रिफिङ गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना छ । अनि मन्त्रिपरिषद्बाट समेत संसद् बैठक सुरु हुनु केही घण्टाअगाडि मात्रै बजेट पास गर्ने योजना सरकारको छ । यसले गोप्यतामा अपनाइएको सावधानी पुष्टि गर्छ ।
प्रश्न उठ्छ, यो हदको गोप्यता किन ? अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यदि बजेटबारे केही घण्टा अगाडी मात्र जानकारी पायो कसैले भने त्यो सूचनाको आधारमा धेरै ठुला निर्णय लिन सक्छ र त्यसले सीमित व्यक्तिलाई लाभ अनि बहुसङ्ख्यकलाई हानि पुग्न सक्छ । त्यसैले आम नागरिकबाट होइन कि चल्तापुर्जाबाट बजेट सम्बन्धी सूचना जोगाउनु पर्छ ।’
बजेटबारे जानकार अर्का एक व्यक्तिले भने, ‘यती बुझ्नुस् कि बजेट गरिब दुखीको हितलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको छ । सङ्कटको क्षति गरिबले कम र धनीले बढी व्यहोर्नु पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता यो बजेटले लिएको छ ।’ उनका अनुसार त्यसैले पनि बजेट केही फरक र हुने वर्गको लागी त्यति उदार नहुने खालको छ ।
त्यसो त अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको यसअघिका बजेटबाट पनि व्यापारी र समाजका बिचौलियाहरू त्यति खुसी हुन सकिरहेका थिएनन् । उनीहरू अर्थमन्त्रीले व्यवसायको लागी उपयुक्त वातावरण नबनाएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री चाहिँ ‘आफूले लुटतन्त्र अन्त्य गरेको, कालोबजारी र अत्यधिक नाफाखोरीलाई निरुत्साहित गरेको र गरिब मार्ने, धनी पोस्ने नीतिको अन्त्य गरेको कारण देखिएको आक्रोश’ का रूपमा उनीहरूको आपत्तिलाई व्याख्या गर्दै आएका थिए ।
आजको बजेटले दलाल पुँजीपतिको मुख अझ कालो र गरिब दुखीको अनुहारमा थोरै भएपनी आशाको सञ्चार गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।